Jirid Af: febrero 2011
Waxaan ahay jacaylka runta, waxaan kula iltiraa
qalbiyada wiil iyo gabarba si isle’egba olal.
Dabadeed kan kale, taahayo, baa yiri, “Yeelkaaga,
waxaan ahay jacaylka aanan ku dhacin inuu sheego magaciisa”.
(I am true Love, I fill
I am the love that dare not speak its name.)
- Lord Alfred “Bosie” Douglas, (two loves)
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 10:05
Tilmaamo: Codadka Anglosaksonka, Isujinsigalmood, Maansooyin Tarjuman
Maansoole: Gösta Ågren
Dal: Iswiidhan (Sverige)
Ku dhaxdaban xorriyo
waxaanu si rajobeelan u raadinaa
waa yeelaan furitaan.
Instängda i friheten
söker vi förtvivlat
en dörr, men alla
går att öppna.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 9:27
﻿ Maanta hargab ayaan qabaa,
laakiin dhabarka ima xanuujiyo.
Maanta waxaa qura i xanuujiyo fiirada
ee cunuggaas soomaaliga.
Waa cunug aan haysanin waxna.
Cunug alaab-ciyaareed la’, cuno la’,
Waxaan joogay halkaas
waxaanna ku dhahay cunugga soomaaliga:
- Xoogaa sheekooyin baan kuu keenaa.
Cunuggana baa fiirada igula dhahay:
- Ani ima hayaan sheekooyin
Maanta anina ima hayaan tixyo
waayo waxaa i xanuujiyo fiirada
ee cunuggaas Dalka Soomaaliya.
Waa cunug u saaran uun duqsiyo
indhaha iyo bushimaha qalalan.
(waa ee duqsiyadaas
uun qaniina maydka)
El niño Somali
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 21:01